Qalabka Dhoobo, Caag Dhoobo, Wareeg Qaabaynta CNC Go'aan Mashiin, Ddie Quusashada, CNC Mashiinnada Muuqaal soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha - Shenzhen Xiangfu Go'aan Warshadaha Co., Ltd
Ku saabsan Annaga
Qalabka Birta Caaryada
Go'aan Dhiman Qabashada
Go'aan Been abuur
Gawaarida Caaryada Aqoonyahanada
Caafimaadka Caaryada qaybo
Dijital ah Caaryada Qalabka
Hoyga Qalabka Wasakhooyinka
Hoyga Taxanaha Qaybaha
Wareeg Caaryada Wax soo saar Taxanaha
Dibadda Biyo Sanduuq
CNC Go'aan Mashiinka
Aero Boos Qaybaha
Xawaare sare Wadada Tareenka Qaybaha
Go'aan Caafimaadka Qaybaha
Dijital ah Qalabka
Caado Fiiq Qaabaynta Alaabada
Qiimaha Bandhig Taxanaha
Gaari Tuulo Qaybaha
Xayawaan Dhalo Afuuf Caaryada
Sanduuq Afuuf Caaryada
Kaydinta Afuuf Caaryada
Cab Dhalo Afuuf Caaryada
Warshadaynta Waxsoosaarka Bacda Weyn, Shenzhen Xiangfu Precision bir ka samaysan, oo ku siinaya shaabadaynta iyo sawir qaadaha, waarta, iibka tooska ah ee warshadaha, tayo hooseeya iyo qiimo hooseeya, sano oo waayo-aragnimo ah, tayo sare leh.
Waxaa jira 4 qeybood oo ka sameysan Mashiinka Qalabka Mashiinka, Qalabka Birta Xumadda, Mashiinka Mashiinka Mashiinnada, Kala Hortagga Dhimashada, Kala Hortagga Qarxinta,
Shenzhen Xiangfu Precision Industry Co., Ltd waa shirkad soo saare qalabka mashiinka caaryada ee Shiinaha, dhammaan noocyada wax soo saarka iyo iibka, tilmaamo kaladuwan, tayo sare iyo qiimo hooseeya, moodallo dhameystiran, ku-talogalsan, iibinta tooska warshad!
> Kombuyuutar Qaybaha Qalabka Caaryada> Caafimaadka Qaybaha Qalabka Caaryada> Gaari Qaybaha Qalabka Caaryada
Caaryada caaga ahi waa aalad ka sameysa warshadaha balaastikada oo lagu barbar dhigo makiinadaha caaryada caagga ah si loo siiyo alaabada caaga ah qaabeynta dhameystiran iyo cabbirka saxda ah. Sababo la xiriira noocyada kala duwan ee balaastigga ah iyo hababka wax lagu farsameeyo, qaab dhismeedka mashiinnada caaryada caagga ah iyo alaabada caagga ah way dhib badan yihiin, sidaa darteed noocyada iyo qaab-dhismeedka Moodhadhka Caagga ah sidoo kale way kala duwan yihiin.
Waxaa jira 4 qaybood oo ka kooban caaryada caaga, Wershadaha mashiinka gawaarida, Qeybaha caaryada Caafimaadka, Qalabka Moodhadhka Dijitaalka ah, Farsamada Qalabka Guryaha, Weelasha Qalabka Guryaha,
Shenzhen Xiangfu Precision Industry Co., Ltd waa shirkad soo saarta caag caag ka sameysan gudaha Shiinaha, dhammaan noocyada wax soo saarka iyo iibka, tilmaamooyin kala duwan, tayo sare iyo qiimo hooseeya, moodallo dhameystiran, ku-talogalsan, iibinta tooska warshad!
> Caafimaadka Tijaabad Mashiinka Caaryada Qaybaha> Caafimaadka Mashiinka Caaryada Qaybaha> Fan Mashiinka Caaryada Qaybaha
Qaababka loo yaqaan 'Rotering Sharing' sidoo kale waxaa loo yaqaanaa isku-wareegga, sameynta laf-dhabarta, caaryada wax-u-samaynta, kala-wareejinta, sameynta wareegga, iwm. Qaabka wax-u-samaynta ayaa ah in marka hore lagu daro caag (mitir) ama budo ah caaryada, ka dib marka caaryada la xiro, ka dhig Wareegga laba dhinac oo iskeer toosan, halka kuleylinta caaryada, sheyga caagga ah ee caaryada si tartiib tartiib ah isku dhafka ah una dhalaali doona oo u hoggaansan dusha sare ee godka hoostiisa iyada oo la eegayo cufnaanta iyo kuleylka, waxaana loo sameeyay qaab la mid ah godka . Kadib, waa la qaboojiyaa oo qaabeeya, oo hoos loo siiyaa si loo helo badeecad la doonayo.
Nidaamka Qaab-dhismeedka Wareegga Inta lagu jiro geedi-socodka qaabeynta oo dhan, caaggu wuxuu gabi ahaanba ka xor yahay xoog kasta oo dibadda ah marka laga reebo culayska.
Shenzhen Xiangfu Precision Industry Co., Ltd waa shirkad iibisa xirfadleyda Rotat ional Molding, nooc kasta oo wax soo saar ah iyo iib ah, tilmaamo kala duwan, tayo sare iyo qiimo hooseeya, moodallo dhameystiran, dhar-sameys, iibinta tooska warshad!
> Nalalka Qaxwada Miis> Kursi Miis> Nalalka Sofa
Saxnimada mashiinka CNC Precision Machine wuxuu ka kordhay 10Î¼m ilaa 5Î¼m, xarunta saxda ah ee qalabka wax lagu hagaajiyo waxaa laga hagaajiyay 3 ilaa 5Î¼m ilaa 1 ilaa 1.5Î¼m, saxnaanta saxda ah ee saxda ah ee qalabka ayaa bilaabey inay gasho cabirka nanometerka (0.01Î¼m) ). Si loo gaaro mashiin xawaare sare leh oo sareeya, Mashiinka Xakamaynta ee CNC wuxuu si dhakhso leh u horumariyey qaybaha ay ka midka yihiin qulqulka korantada iyo matoorrada qotodheer, iyo aagaga codsiyada ayaa la sii balaariyey.
Qalabkayaga CNC Precision Machine wuxuu u qaybsan yahay 6 qaybood, oo kala ah Aero Space Parts, Qeybaha Xawaaraha Sare, Qeybaha Gawaarida, Qeybaha TeleCommunication, Qeybaha Dijitaalka ah, Qeybaha Caafimaadka Ka Hortagga.
Shenzhen Xiangfu Precision Industry Co., Ltd waa shirkad qibradeysan oo ah CNC Precision Mashiinka Shiinaha, dhamaan noocyada wax soo saarka iyo iibka, qeexitaanno kala duwan, tayo sare iyo qiimo hooseeya, moodallo dhameystiran, ku-habboon, warshado toos ah!
> Mobil Telefoon Qalabka Qaybaha> Caafimaadka Kuraas-curyaameedka Qalabka> Caafimaadka Qalabka Qalabka
Shenzhen Xiangfu Precision Industry Co., Ltd waa shirkad saareysa sahaminta isku-dhafan ee horumarka, qaabeynta, waxsoosaarka iyo iibka.Waxaan leenahay waaxda wax soosaarka birta, waaxda caaryada caagga, saxda CNC warshadaynta, u dhinta iyo sameynta waaxda ganacsiga, qeybta daaweynta dusha sare. iyo waaxda kale ee ganacsiga.
Alaabada ayaa si balaadhan looga isticmaalaa isgaadhsiinta, qalabka saxda ah, qalabka caafimaadka, tareenada xawaaraha sare, gawaarida, duulista iyo warshadaha kale. iyo isu imaatin, iyo adeegyo kale oo hal mar lagu istaago.Waxaan leenahay dhakhso, waax gacmeed lagu sameeyay, oo bixin kara horumarka iyo qaabeynta qaar ka mid ah alaabada fikradaha ah iyo adeegyada kale ee wax soosaarka oo dhan si loo daboolo baahiyaha macaamiisha.
MAXAAD KA MID YIHIIN
Sannado waayo-aragnimo warshadeed ah ayaa la aamini karaa
Cilmi Baadhis iyo Horumar
Shirkaddu waxay leedahay koox horumarin soosaar leh oo wax soo saar leh.
Ganacsi baaxad leh
Ku takhasusay soo saarista Warshadaha Hoyga
La tacaal dhammaan noocyada dhibaatooyinka iibka ka dib adiga adiga
Sameeyay gudaha Chgudahaa: waa maxay waa happengudahag?
Beddel waa a cusub soosaarka: mobilada Internetka dul ganacsiga moodel ee subversidul iyo at ah isku mid ah waqti, waa sidoo kale beddelaya iyo xitaa subversidul wax soo saar hab, weyn fursadaha iyo rwaaks ku cdultain waa.
Jarmalka macaamiisha ku booqasho xiangfu CNC fackury ee kormeer iyo hanuun
Fiiq Qaabaynta Waaxda, CNC Waaxda, Dhiman tuuraya Waaxda, Been abuur Waaxda, Staming Waaxda, 3D Daabacaadda Qeybta. Bixi wasakhooyinka iyo waxyaabaha sida laga soo xigtay ku cuskumer baahi.
Ruush Gaari Qaybaha Ganacsiga Shuraako
Ruush Gaari Qaybaha Ganacsiga Shuraako booqasho banaanka wasakheynta wax soo saar dul feb 28, 2019 Qorrax qurux badan lammaaneï¼Œï¼Œ Shiinaha iibka representative,Shiinaha
Cinwaanka: B1227-1288, yoalisa sayniska iyo tikniyoolajiyadda dhismaha, 1aad wadada longhua degmo, shenzhen, Shiinaha
Waayo anagaydiimaha ku saabsan our waxyaabaha ama liiska qiimaha, fadlan bax aad emayl ku anaga iyo anaga doonaa noqon gudaha kuuch withgudaha 24 saacado.
Xuquuqda daabacaadda @ 2019 SHENZHEN XIANGFU KA HOR GUDAHA CO., LTD. Dhamaan Xuquuqda Waa la keydiyey